Madaxweynaha Hirshabelle ‘Waare’ iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Beledweyne +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweynaha Hirshabelle ‘Waare’ iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Beledweyne +(SAWIRRO)
Beledweyne (Halqaran.com) – Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle, Dr Maxamed Cabdi Waare iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa Axadda maanta waxa ay gaareen magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Wafdiga Madaxweyne Waare oo ay qeyb ka yihiin Xubno ka tirsan labada Gole ee Hirshabeelle ayaa maalmahaan ku sugnaa magaalada Jowhar,
Waxaana Garoonka Diyaaradaha magaalada Beledweyne ku soo dhaweeyay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan, Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle iyo Saraakiisha Ciidamada.
Madaxweyne Waare iyo Xubnaha labada Gole ee la socda ayaa la filayaa inay kormeer ku tagaan goobaha guddiga gurmadka iyo Maamulka degmada ay ka wadaan xeritaanka si looga hortago fatahaad uu sameeyo Wabiga.
Waxaa magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka jirta xaalad cabsi ah oo ku aadan fatahaad xoogan uu sameeyo wabiga Shabeelle, waxaana dadka qaarkood ay bilaabeen inay barakacaan.
Madaxweyne Waare oo gaaray Beledweyne